Talooyin ku Saabsan Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada Ka soo Dhexeeya Khubarada Cilmiga ah
Ma rabtaa inaad hagaajiso istiraatijiyada suuq-geynta warbaahinta bulshada? Waxaa jira waxyaabo badan oo talooyin iyo khiyaamo ah oo suurtagal ah, laakiin talooyinka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee Max Bell, Khabiir kuxirsan , ayaa lagaga dooday hoos.
Isticmaal Twitter si aad u kobciso Dhageysigaaga
Falanqee Macluumaadka hore ee lagu hagaajinayo Xogta
Khabiirada ayaa sidoo kale sheegaya in ganacsatadu ay falanqayn doonaan content-koodii hore si loo hagaajiyo tayada iyo guud ahaan muuqaalkooda. Waa inaad fiiro gaar ah u leedahay daabacaadda waxyaabaha tayada leh, waana inaysan jirin wax khasaare ah oo ku saabsan..Isticmaal qalab kala duwan si lafaguraan loona qiimeeyo waxqabadka marxaladii hore, iyo hagaajinta muuqaalka guud ee muuqaalada warbaahinta bulshada. Marka hore, waa inaad gashaa qodobka muhiimka ah ee sanduuqyada raadinta warbaahinta bulshada si aad u aragto nooca nuxurku ku lug leeyahay dad badan iyo dad badan. Waxay ku siin doontaa fikrad ah waxa ay dadku jecel yihiin sida ugu badan iyo sida loo horumariyo maqaalkaaga mustaqbalka iyaga oo ku jira keywords keywords ah oo si fiican loogu talagalay iyaga.
Inuu ahaado mid waxtar u leh Muuqaalka Muuqaalka leh Xiriirrada
Muujinta muuqaalka micnaheedu waa inaad ku wadaagtid fiidiyowyada iyo sawirada lambar tiro badan marka ay timaado qorsheynta muuqaalka muuqaalka, waa inaad ka fekertaa nooca content ee dhagaystayaasha aad jeceshahay. Waa mid aad u muhiim ah in la wadaago oo kaliya waxa taageerayaasha iyo taageerayaasha jecel inay sahamiyaan. Waa in aanad waligeed wadaagin fiidiyowyada ama dadka qaangaarka ah ee qaangaarka ah si aad ugu wado taraafikada website-kaaga sababta oo ah waxay dhaawici kartaa sumcaddaada guud ee internetka.
Beddeli Mawduucyada Mawduuca
Waa inaadan diideynin inaad tijaabisid noocyo kala duwan oo ka kooban. Tusaale ahaan, waad wadaagi kartaa fiidiyowyo badan oo YouTube ah iyo muuqaalo badan oo ku saabsan Facebook iyo Instagram. Waa inaad had iyo jeer hubisaa in mashaariicdaada warbaahinta bulshada ay heleen waxyaabo kala duwan iyo noocyo kala duwan oo maadi ah si aad u kordhin karto muuqaalkaaga internetka.
Bixi Macluumaad Dheeraad ah
Ma jiro wax gaaban oo ah xirfad ku-shaqeysiga internetka ama ganacsiga, waana inaad si aad ah u shaqeyneysaa. Waxa ugu muhiimsan waa inaad adigu si joogto ah u bixiso si aad u kordhiso hawlgelinta dhammaan noocyada warbaahinta bulshada. Tani waxay kaa heli doontaa waxyaabo badan oo jecel, saamiyo, iyo faallooyin, sidaas oo kaa caawinaysa inaad nolol ka hesho raaxada gurigaaga. Waxaad baabuur badan ku wadi kartaa bogagga shabakadda adigoo ku siinaya maalin kasta. Iyadoo aan lahayn tayada tayada, dadku way caajisaan waxayna ka tegi doonaan boggaaga ama bogagga warbaahinta bulshada. Waxaan hubaa inaadan rabin inaad u ogolaato in taasi dhacdo, markaa waa inaad maalin kasta maalin kasta u soo bandhigtaa tayada tayo leh.